Wariye Maano Iyo Shaqadeeda Cusub Ee Biyo Dhaamiska ! Warbixin Iyo Sawiro Murugo Leh . | Qubanaha	Home
Monday, September 24th, 2012 | Posted by admin Wariye Maano Iyo Shaqadeeda Cusub Ee Biyo Dhaamiska ! Warbixin Iyo Sawiro Murugo Leh .
Wararka laga helayo xerada qaxootga xagardheer ee dadaab aya ku warmaya in tiro wariyaal ah oo ka howl galayay Somaliya haatan nolol xumo aad u liidatad in ay ku hayso gudaha xerada xagardheer.
Maano Xuseen Ibraahim oo ka tirsaneyn wariyaashii ka howl galayay idaacadii Horn Afrik ee Marka ayaa haatan barac ku timid xerada qaxootiga iyada iyo sedex caruur oo ay dhashay ayna u sii dheer tahay hooyadeed oo waayel ah .
Maana ayaa sanadihii 2005-2006 -dii ka howl galeysay Horn Afrik Marka halka idaacada Shabelana si madax baan xili dambe ay ula shaqeeysay , waxa
ku qasaby in ay soo barakacdo ayaa ah mid ay wada qabaan wariyaasha taasi oo ah dhanka amaanka xilli dilalka ka dhanka wariyaasha Somalida uu gaaray
heer aad u saareya .
Socdaalkeedaan qaxa ah ay ku timid Maano xerada xagadheer 2- Febarayo ee sanadkaan lama kulmin war farxad leh ee waxa ay gashay nolol aad u liidata .
Maano dadka garanaya ee ay soo wada shaqeyeen waxa ay si weyn ugu xasuustaan in ay aheyd saxafiyad howl kar ah isla markaana si weyn uga dhex muuqutay dhanka arimaha bulshada.
Wariyaal ka tirsan shabakada arimaha qaxootiga Somalida Dadaab ka hadasha ee dadaabrefugee.org ayaa Maano ku booqday teendho yar oo aysan dhex oolin agabkii jiifka iyadoo ay u sii dheer tahay cadceeda qoraxda iyo dabeesha oo ay marti u noqotay .
Wariye Maano waa ay ku adag tahay nolosha xerada mana heli karto wax ay nolosheeda ku maareyso iyadoo kaliya dhowr kiilo raashiin isugu jira bur , galeey iyo saliid ka hesha WFP , waxaana hubaal in qoys ka kooban 5-ruux in ay ay adag tahay in nolosha ku maareeyaan .
Marka ay weysay fursado iyo agab u sahlaya in ay wadato shaqadeedii wariynimo waxa ay danta ku qasabtay in ay gasho biyo aruurid.
Maano oo tabar ahaan awoodin qaadista 20-liitar oo biyo ayaa maalintii illaa shan qoys u xamaasha ugu yaraan 20- jirkaan oo biyo halka lacagta ka soo gashana ay dhan tahay 100- shilin oo lacagtakenyaah doolar ahaanna xitaa aan gareyn hal doolar , waa nolol adag xitaa ma buuxin karto caanaha sedex caruur oo isuma qaddo ah .
Waa Xanuun qof waliba oo dareen leh damqineysa , waxa ayna shabakada dadabrefugee.org ka codsaneysa qof waliba oo dareemaya baaxada xanuunkaasi ay gacan siiyaan maano oo baahida ugu daran ay tahay hoyga iyo quutal yoomkii caruurteeda .
Sidoo kale Wariye Maxamuud C/raxmaan Beenbeene oo si weyn looga dhex garanayo saxaafada Somaliya isla markaana sanado badan Afgoye uga waramayay Tvga iyo idaacada horn afrik iyo GBC ee magalada Muqdisho ayaa isna ka mid ah wariyaasha ku dhibaateysan xerada Xagardheer Dadaab .
Beene beene oo bilaawgii sanadkan soo gaaray xerada ayaa xaalad adag isna ku jira , marka laga soo tago dhaawacyo rasaaseed oo soo gaaray xilli la doonayay in laga taqaluso ayaa waxaa haatan u sii dheer in uu u baahan yahay qaliin dhanka lugta ah iyadoo nabar ka soo baxay uu fariisiyay una saamixi waayay in uu dhaq-dhaqaaqo tiiyoo ay u sii dheer tahay xanuun dhanka sokorta ah oo ku dhacay isla markana uusan si joogta ah u helin daawadeeda.
Beene beene oo isna wariyaasha dadaabrefugee.org booqdeen ayaa qoyskiisa oo ka kooban 13 caruur iyo labadooda hooyo waxaa ka muuqday nolol aad u liidata .
Hadaba hadaad daneyneyso in aad caawiso ama in aad xogtooda wax ka ogaato nagala soo xariirinfo@dadaabrefugee.org si aan xariir idinkugu sameyno .
The Voice Of The Refegees.
Short URL: http://www.qubanaha.com/?p=6319
Posted by admin on Sep 24 2012. Filed under Wararka.
Kenya:Halista Al-shabaab awgeed waxaaa muhiim ah in la kordhiyo AMISOM.
Dowalada Soomaaliya oo mowqif adag is ka taagtay Arimaha Gobolada.(Warsaxaafdeed)
C/raxman Badiyow:Xalka Kismaayo waa wada hadal.
Difaaca Reer Serbia Ivanovic oo Xalay Chelsea Gacanta ka saaray Koobka Uero Liguae ka dib markii ay ka badiyeen Benfica……………
Haweyn Nairobi ku shiray oo si adag u canbaareyey Mooshin laga keenay Ra”iisulwasre Saacid .+Vedio
Ma ahan in dhiig dambe ku daato! (Inqaasta Yusuf-Garaad)
Inter, Liverpool iyo Real Betis oo is ku heysta ciyaaryahanka Montoya.
Qaab noocee ah ayey ugu hadashay Xukumada Xaaladaha Jubooyinka?
Golaha Wasiirada oo ansixiyay Hindise Sharciyeedyo.
Cumar Buraale Axmed :Anigana waxaan ahay Madaxweynaha maamulka Waamo State oo Jubbooyinka iyo Gedo ka dhisan.